हालैका वर्षहरूमा, घर उपकरण एक सुरुचिपूर्ण उपहार हामीलाई प्रसन्न। आज फलाम कार्यहरु अधिकतम नम्बर संग बेचिन्छ। तर कहिले काँही हतारमा, हामी कुनै पनि ध्यान उपकरण संलग्न निर्देशनहरू तिर्न, वा जो यो कसरी हेरचाह गर्न विस्तृत वर्णन लेबल कुराहरू, मा छैन। तपाईं अन्त परिणाम, यस्तो मामला मा प्राप्त छ जो बारेमा अंदाजा? हो, हो, ठीक। हाम्रो फलाम को तलवों मा जलेको कपडा को टुक्रा छन्। पहिले, यो स्थान gracefully छैन देखिन्छ। दोश्रो, यो सतह दोष हामी इस्त्री गर्दा अन्य कुराहरू असर गर्न सक्छ।
यस मामला मा के गर्न? फलाम कसरी सफा गर्न जलेको ऊतक को?
निम्नानुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम छ: हामी सकेसम्म चाँडै कार्य गर्नुपर्छ।
दोस्रो नियम, स्थिति बढन छैन ताकि पनि मा सुँघ्छन् गर्न छैन जो। विभिन्न क्लीनर जो देखि एकमात्र गरे सामाग्री आधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
कसरी भने उहाँले इस्पात सतह, Tissues देखि जलेको फलाम सफा गर्न?
यस मामला मा, थुप्रै तरिकामा शुद्धीकरण छन्। तिनीहरूलाई केही विचार गर्नुहोस्।
एक टूथपेस्ट प्रयोग गर्नुहोस्। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमीले मात्र भयो भने, यो उपकरण को एकमात्र मा राखे, र त्यसपछि एक नरम कपडा संग क्षतिग्रस्त क्षेत्र हटाउन। उपाय तुरुन्तै लिएको छ भने, यो विधि सामान्यतया मद्दत गर्छ।
तपाईं प्रयास र सिरका गर्न सक्नुहुन्छ। यो कपास वा सन Moisten। मा पनि इस्त्री बोर्ड - को polyethylene राख्नु, र माथि को अनावश्यक कुराहरू। सिरका मा भिगो एक थाड़्ना मा एक फलाम खर्च। सावधान रहनुहोस्: तपाईं एक steamer छ भने, पदार्थ उहाँलाई लागि प्वाल फस्न हुँदैन।
"अतिरिक्त" लघु अहानिकारक नुन। तपाईं सतह scratching को जोखिम चलाउन देखि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ मात्र चरम अवस्थामा। यो एक तातो फलाम संग धेरै पटक अखबार वा कपडा मा नुन खन्याउन, र त्यसपछि यो भन्दा बढी जाने आवश्यक छ। प्रक्रिया पछि, तपाईं सतह सफा गर्न आवश्यक छ।
माटोको फलाम कसरी सफा गर्ने?
यो सामाग्री को मोडेल हालै घरेलू उपकरण को बजार मा देखा पर्नुभयो। तथापि, तिनीहरूले धेरै Housewives लागि मनमोहक अधिग्रहण भएका छन्। कारण एकदम सरल छ: Ergonomic र सुखद डिजाइन involuntary प्रशंसा कारण। तिनीहरूले ऊतक को एक उच्च स्लाइड गुणक छ। तर सेरामिक्स - एकदम Moody आवरण। adhering सामाग्री को टुक्रा, यन्त्र बिगार्न सक्छ सधैंभरि यसलाई अक्षम। कपडा मा जलेको फलाम कसरी सफा गर्ने? तपाईं यस्तो उपकरणको शुद्धीकरण लागि विशेष उपकरण किन्न आवश्यक भनेर थाहा हुनुपर्छ। अब सेरामिक्स लागि विशेष डिजाइन भनेर Pencils छन्। सतह RUB र फलाम अन गर्न: तिनीहरूलाई धेरै सरल छ प्रयोग गर्नुहोस्। कोटिंग पगाल्न सुरु सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। त्यसपछि बस तलवों सफा कपडा संग सूखी हटाउन।
कसरी सफा गर्न Teflon फलाम?
अर्को नवीनता जो तपाईं बिस्तारै कुराहरू फलाम गर्न अनुमति दिन्छ Teflon छ। यो एकमात्र प्रदूषण थिए भने, कुनै पनि मामला मा घर उपचार यसलाई सफा गर्न सक्दैन। यो उद्देश्य लागि, त्यहाँ Pencils छन्। त्यहाँ हाल भएको र फलाम को हेरविचार लागि सेट छन्। तिनीहरूले अपेक्षाकृत सस्तो हो। तपाईं हात मा कुनै पनि हालतमा छैन, यदि हामी तुरून्त कार्य गर्नुपर्छ, साबुन को एक टुक्रा लिनुहोस्। यो तातो सतह RUB गर्न आवश्यक छ, र कार्बन जम्मा यसको ठंडा धुने साबुन पछि छ।
अब तपाईं फलाम जल ऊतक कसरी सफा गर्न थाहा छ। तर यो ध्यानपूर्वक निर्देशनहरू पढ्नुहोस् र यस्तो गलत अर्थ रोक्न राम्रो छ।
एक समीक्षा र rekomenditsii: जल मृदुकरण लागि फिल्टर
डिटेक्टर फ्लस - सहायक आवश्यक मरम्मत
Bimetallic ताप radiators आयाम। Radiators: उचाइ र लम्बाइ
समीक्षा, मूल्य समीक्षा, छनौट लागि सुझाव: लागि सोधपुछ ग्याँस हीटर
"झंकार" को प्रयोगको लागि संक्षिप्त निर्देशन
Cheats "Sainz Moat 2", साथै प्रयोगको
एकाकीपनको समस्या: साहित्य एउटा उदाहरण, तर्क। एकाकीपनको समस्या
तपाईं सफा चाँदी श्रृंखला: आभूषण हेरचाह
कसरी सेतो लुगा संग चिया को दाग deduce गर्न?
संघीय रिजर्व प्रणाली
खोल्दै र मिलिंग मिसिन। औद्योगिक उपकरण
हामी उत्पादनहरु को रिकभरी लागि म्याग्नेसियम प्रयोग
अस्ट्रिया देखि एक उपहार रूपमा के ल्याउन?
अस्पताल "Zheleznovodsk" (आंतरिक मंत्रालय)। Zheleznovodsk मा उपचार, समीक्षा
गतिशील डिस्क - सुविधा वा खतरा?